July 1, 2021 – Kalfadhi
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay iibka dhulka laanta bangiga degmada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug
July 1, 2021 Hassan Istiila0 comment
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland mudane Cabdiirashid Yuusuf Jibriil, ayaa shir-guddoomiyey fadhiga 8-aad ee Kalfadhiga 48-aad ee Golaha Wakiillada DPL, iyadoona kulanka ay la shir-guddoominayeen guddoomiye ku-xigeenka 1-aad mudane, Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan iyo guddoomiye ku-xigeenka 2-aad Mudane, Ismaaciil Maxamed Warsame. Xildhibaannada ayaa cod aqlabiyad ah ku oggolaaday ansixinta iibka dhulka laanta bangiga degmada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, si waafaqsan 52-aad ee dastuurka Puntland. Guddoonka golaha ayaa sheegay in 41 mudane ay oggolaatay, 2 ay aamustay halka aysan jirin mudane diiday. Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa horay baarlamaanka ugu soo gudbiyay codsi…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa calan-saaray Madaxtooyada Qaranka, si loo maamuuso Maalinta Xorriyadda iyo Midnimada ee 1-da Luulyo oo ku aaddan sannad-guurada 61-aad ee ka soo wareegtay xornimada Gobollada Koonfureed iyo midowga Labadii Gobol ee gumaystuhu uu kala qaybiyey. Madaxweynaha ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalintan qiimaha badan oo ku suntan gobanimada, midnimada iyo dowladnimada dadka Soomaaliyeed ee maal iyo naf-ba u huray hanashada Qaran ka tarjumaya himilada iyo hiigsigooda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo salaan sharaf ay siinayaan cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka,…
Dadka Soomaaliyeed ,waxa ay ka mid yihiin umadaha caalamka ee halganka dheer u galay raadinta sidii looga hoos bixi lahaa gumeysiga shisheeye,isla markaana loo gaari lahaa xoriyad, midnimo iyo dhismaha qaran Soomaaliyeed oo wax la qeybsada dunida. Haddaba,1-da Luullyo waa maalin qaran oo loo dabbaaldego xoriyadda gobolada koonfureed iyo israaca labada gobol ee woqooyi iyo koonfur,waana calaamad ama astaan muujineysa in dib loo soo ceshaday madaxbannaanida dhaqdhaqaaqyadii nololeed iyo horumaradii kale ee ay hakiyeen qeybihii gumeysiga ee qabsaday dalka. Taariikhda halgankii Soomaaliya 1-Wajigii koowaad Sanadkii 1507-1543-dii waa markii ugu horeysay…